Fanatanjahantena - Alternatives 10 ho an'ny iOS sy Android
Ny tontolon'ny fanatanjahantena dia iray amin'ireo lohahevitra manaitra ny fientanam-po lehibe indrindra, ny fiderana ary ny fanarahana ny mpankafy azy. Noho izany antony izany dia mitondra ho anao izahay ny fampiharana fanatanjahantena tsara indrindra ho an'ny Android sy iOS.
Arahin'ny olona an-tapitrisany eran-tany ny taranja fanatanjahantena samihafa. Misongadina ao anatin'izy ireo izy ireo: baolina kitra, baseball, basikety, tenisy, ady totohondry, fanatanjahan-tena mahery vaika, ankoatra ny sokajy hafa.
Yahoo Sports: Soccer sy ny maro hafa
Ny atiny manokana atolony anao yahoo sports Tena midadasika sy feno izy io. Azonao atao ny mijery ny valiny amin'ny fotoana tena izy. Ankoatr'izay, ny sehatra misy azy dia ahafahanao mahita antontan'isa, kalandrie, valiny, vaovao farany ary maro hafa.
Tandindomin-doza ve ny laharan'ny ekipanao? Efa manakaiky ve ny farany? Efa manana ianao fampiharana ara-panatanjahantena maimaim-poana izay ahafahanao mankafy ny lalao rehetra.
Miaraka amin'ny rafitra fampandrenesana tsara indrindra azonao atao ny mijery ny statistika ara-panatanjahantena mora sy haingana.
Hanana fahafahana miditra amin'ny famakafakana miaraka amin'ireo manam-pahaizana amin'ny faritra ianao ary hahazo fijery mivelatra kokoa amin'ny lalao na hetsika tsirairay. Ity fampiharana ity dia mifanaraka amin'ny fitaovana finday Android sy iOS, solosaina sy solosaina finday.
365Scores - isa mivantana
Raha miandry hetsika manan-danja toy ny World Qatar 2022 amin'ny 365Scores afaka havaozina ianao. Amin'ny alàlan'ny fampidinana ny fampiharana dia afaka mankafy ny tsara indrindra amin'ny baolina kitra nasionaly sy iraisam-pirenena ianao.
Hahazo ny fampahalalana rehetra momba ny antontan'isa, kalandrie, toerana, mpitarika ianao, mandray fampandrenesana isan'andro, manaraka lalao ary maro hafa.
Ny haavon'ny fampandrenesana dia tena haingana, mahomby ary azo antoka. Raha te hahazo avy baolina kitra ny faminanianao Ity fampiharana maimaim-poana ity dia nomanina mba hanolotra anao ny antontan'isa tsara indrindra.
Ankoatr'izay, azonao atao ny mampifanaraka ny vaovao azonao hifanaraka amin'ny tombontsoanao. Azonao atao ny manaraka ny fandrakofana rehetra momba ny ligy 365Scores.
TheScore: isa mivantana amin'ny fanatanjahantena, Vaovao, Stats & Horonan-tsary
Rehetra amin'ny rugby, baseball, baolina kitra, baskety na sokajy hafa ahitanao azy TheScore dia ny fampiharana fanatanjahan-tena malaza indrindra eto an-tany.
Manome anao fahafahana havaozina 100% miaraka amin'ireo ekipa ankafizinao izy io ary mifantina ireo tsipika izay manintona anao indrindra, mba hisehoany mifanaraka amin'izany. Ny vaovao momba ny mitarika fanatanjahantena ary ny fahaiza-manao manokana dia hita eto.
Hahita vaovao isan-karazany ianao, hevitra, isa, vinavina, tiana, isa, tantara sosialy, votoaty multimedia ary maro hafa. Misy amin'ny fitaovana finday Android sy iOS, solosaina sy solosaina finday.
LiveScore: Fanavaozana ara-barotra mivantana
Naoty ambony, vaovao ary hetsika ara-panatanjahantena mifandraika indrindra hitanao izany ao LiveScore. Eken'ny mpankafy an'arivony maneran-tany izy io noho ny fahamendrehany sy ny hafainganam-pandehany.
Miaraka amin'ity interface ity dia afaka manara-maso ny lalao tsara indrindra ianao, fantaro hoe iza no mitarika ny filaharana, kalandrie. Ho fanampin'izany, ianao dia ho isan'ireo voalohany mahafantatra ny daty mety ho fanasokajiana, isa majika, ankoatry ny zavatra hafa.
Ity fampiharana ity dia maimaim-poana tanteraka ary mifanaraka amin'ny fitaovana finday Android sy iOS, solosaina ary solosaina finday.
Azonao jerena ihany koa, mifandraika amin'ny lohahevitra: Fampiharana vaovao tsara indrindra ho an'ny finday iOS sy Android
Azontsika tsoahina avy amin'ny anarany fa an'ny fantsona iraisam-pirenena amerikana ity fampiharana ity espn sport, orinasa tompon'andraikitra amin'ny fandefasana hetsika ara-panatanjahantena nanomboka tamin'ny 1979.
Nafindrany any amin'ny anao izao ny votoatiny IOS, fitaovana finday Android ary solosaina. Ny rafi-baovaony sy ny fandrakofana lalao dia mahatonga azy io ho iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra hanarahana fanatanjahantena.
Amin'ny fisafidianana fotsiny ireo ligy sy ekipa tianao indrindra dia afaka miditra amin'ny atiny manokana ianao ao anatin'ny segondra vitsy. Ny mpankafy lehibe indrindra eran-tany dia ho afaka hahita ny valin'ny baolina kitra amin'ny ESPN.
baolina kitra ESPN Mamela anao hankafy ireo horonan-tsary manaitra indrindra amin'ny vokatra ara-panatanjahantena miaraka amin'ny sary avo lenta amin'ny fotoana rehetra, na aiza na aiza.
CBS Spots App - Scores, News, Stats & Watch Live
Amin'ity interface ity dia afaka mahita vaovao momba ny fanatanjahantena mifandraika amin'ny ligy lehibe amin'ny baseball, basikety, baolina kitra ary taranja hafa ianao.
Ny fampiharana CBS Sports Izy io dia mifanaraka tanteraka amin'ny IOS, fitaovana finday Android ary solosaina.
Tena mety raha te-hahafantatra ny zava-drehetra momba ny fanatanjahantena sy ny hetsika ataony indray mandeha ianao. Iray amin'ny fampiharana fanatanjahantena maimaim-poana tsara indrindra avy amin'ny fitaovana finday.
Maimaim-poana tanteraka izy io ary tsy mitaky famandrihana. Amin'ny alàlan'ny fampidinana sy fametrahana azy fotsiny dia afaka manana ny vaovao sy horonan-tsary rehetra eo an-tananao ianao.
Azontsika atao ny mamaritra ny fampiharana ho fitaovana famenoana satria izy io dia manome karazana fampahalalana rehetra. Na izany aza, raha misafidy vavahady, pejy ary votoaty ara-panatanjahantena ho ankafizinao, dia hanana ny fampahalalana momba ity faritra ity maimaimpoana tanteraka ianao.
Izy io dia iray amin'ireo fitaovana feno indrindra manome Google Play mifandraika amin'ny tontolon'ny vaovao. Mpanampy Google Afaka manampy anao hahafantatra ny vaovao mifanaraka amin'ny tombontsoanao indrindra izany.
Maimaim-poana tanteraka ny fampiharana Google, manana fampiasa tena tsara ary azo ampiasaina amin'ny finday misy rafitra miasa Android, iOS, solosaina sy solosaina finday.
Fanatanjahantena mahatratra 22 no mipetraka ao anatin’ity rafitra ity izay hijerena ny fifaninanana sy ny vaovao rehetra. Avy amin'ny fampiharana tokana tokana.
Miaraka amin'ity interface ity amin'ny findainao dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny ekipa, mpilalao, kalandrie, isa, vinavina, lafiny, mampiavaka, antontan'isa ary maro hafa ianao.
En SofaScore ny vokatra sy ny vaovao dia avy hatrany. Ny vaovao farany fanatanjahan-tena Azonao atao ny mahazo azy ireo amin'ity fampiharana ity maimaim-poana tanteraka ary miaraka amin'ny fluidity lehibe satria mora ampiasaina ny interface.
Flash Score My Bookmarks
Izy io dia fitaovana mora hita ao amin'ny App Store, amin'ny toe-javatra iPhoneary Google Play for Android. Izy io dia nomanina mba hanomezana ireo hetsika mifandraika amin'ny lalao tsirairay, vokatra, fifaninanana, daty mety ary vaovao.
Mitady havaozina amin'ny ekipa rehetra, ny antontan'isa ary ny valiny? Eto ianao dia afaka mahita ny zava-drehetra fampahafantarana ara-panatanjahantena miaraka amin'ny fandrakofana lehibe sy fahombiazana. Tsy ny vaovao ihany no azonao fantarina fa ny fanehoan-kevitra ihany koa.
Izy io dia fampiharana tena mahafinaritra sy mora ampiasaina izay maneho ny lafiny rehetra amin'ny lalao toy ny hoe eo amin'ny laharana voalohany ianao. Manome sary mihetsika isan-karazany sy angon-drakitra manokana azonao asiana marika amin'ny fitaovanao.
AiScore - Valin'ny baolina kitra
Raha te-hanaraka akaiky ny valim-pifidianana sy ny fitantarana ny lalaon'ireo ekipa ankafizinao maimaim-poana ianao, aiscocore no fampiharana ilainao. Ankoatr'izay dia efa manana chat ianao ahafahanao mifanakalo hevitra momba ny baolina kitra espaniola miaraka amin'ny olona samihafa eran'izao tontolo izao.
Azonao atao ny mankasitraka ny fihaonana tsirairay miaraka amin'ny kalitaon'ny sary tsara. Ny fampiharana dia ahafahanao manombatombana mora foana ny latabatra toerana, antontan'isa, fanasokajiana, odds, filaharana, fanovana ary safidy hafa.
Iray amin'ny fampiharana fanatanjahantena maimaim-poana tsara indrindra mifanaraka amin'ny rafitra miasa Android sy iOS. Izy io dia fitaovana isan-karazany sy feno. amin'ny AiScore - Valin'ny baolina kitra afaka mahazo izay rehetra ilainao eo an-tananao ianao ao anatin'ny fotoana fohy.
Inona no fanatanjahantena be mpanaraka indrindra eran-tany?
ny fanatanjahan-tena sy taranja lasa singa fialamboly izy ireo. Olona maro eran'izao tontolo izao no manaraka ny tsirairay amin'ireo hetsika ireo amin-kafanam-po.
Noho izany antony izany, ny ankamaroan'ny fantsona fahitalavitra dia mirakitra isan-jato ambony amin'ny Sport News.
Taorian'ny fanadihadiana feno dia vitanay ny namaritra, mifototra amin'ny antontan'isa momba ny mpihaino sy ny lazan'ny Internet izay, baolina kitra no fanatanjahantena be mpijery indrindra. Manana ny toerana voalohany amin'ny laharan'ny lazan'ny saika 4.000 miliara mpanaraka.
Ny vokatra dia tsy mifanohitra rehefa ny Champions League Io no fifaninanana misy mpanaraka be indrindra maneran-tany. Ankoatr'izay, mitombo isan'andro ny fahalianana amin'ny baolina kitra vehivavy, mampiroborobo ny fitomboan'ny mpilalao baolina kitra.
Nahoana no mametraka fampiharana ara-panatanjahantena?
Ny haino aman-jery nomerika dia ahafahantsika mahafantatra avy hatrany ny hetsika tsirairay. Alaivo sary an-tsaina hoe manakaiky ny lalaon'ny ekipa tianao indrindra ary tsy hitanao any an-trano izany.
fampiharana ara-panatanjahantena tsara indrindra Manana azy ireo ianao ary eo am-pelatananao. Tsy isalasalana fa afaka manamora ny fiainanao sy azo ampiharina kokoa izy ireo amin'ny tsindry iray monja.
Azonao atao ny manatanteraka ny adidinao amin'ny anjerimanontolo na ny asanao ary manana fampiharana miasa izay ahafahanao mahita ny vaovao momba ny fanatanjahantena, ekipa ary mpilalao tianao indrindra.